IBarrick Gold (GOLD) yoVimba
Udidi: IBarrick Gold (IGOLIDE)
Thenga iBarrick Gold ngama-40% ngapha nangapha njengeXabiso leGolide eliSetelwe ukuGuqukela phezulu
Ukuhlaziywa: 8 Julayi 2021
IBarrick Gold (IGOLIDE) ngowona mgodi mkhulu wegolide emhlabeni. Ukugxininisa loo nto, umgodi wegolide waseCanada kunye nomgodi wobhedu ungumnini wesininzi seNevada Gold Mines kwindibaniselwano neNewmont, ethathwa njengeyona ndawo inkulu kwezemigodi ehlabathini kunye neyona inengeniso.
Umsebenzi we-Nevada wenza isiqingatha semveliso yegolide yenkampani, kulo nyaka iya kuthi ifikelele kwizigidi ze-4.4 zeetawuni.
Ixabiso legolide, nangona ukurhweba ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ze-1,683 zeedola ezichaphazelekileyo nge-30 ka-Matshi, kusekude kumgama ophakamileyo wama-2,067 weedola ofikelelwe ngo-Agasti 2020, ngesinyithi esimthubi sithengiswa nge-1,812.
Ixabiso lesabelo likaBarrick lichukunyiswe kakhulu lixabiso lesinyithi esixabisekileyo, ke emva kokunyuka kwi-30.29 yeedola ngo-Septemba wonyaka ophelileyo, urhwebo lwesitokhwe kwiinyanga ezili-12 eziphantsi kwe- $ 18.56 nge-26 kaFebruwari kulo nyaka kwaye ngoku urhweba nge- $ 21.19, ebonisa ukubuyela umva kuxabiso lwegolide.
Kunyaka ophelileyo iBarrick Gold yenza ingeniso nge-2.3 yeebhiliyoni zeerandi, ngexabiso eliphakathi lokuthengisa ngegolide eliqikelelwa kwi-1,765 yeedola nge-ounce, ngokweCredit Suisse. Ukushiya ecaleni eminye imisebenzi yayo, kwaqikelelwa ukuba inkampani ingongeza i-500 yezigidi zeedola kumgca wayo osezantsi, ukuba ixabiso legolide belinokunyuka liye kwi-1,900 yeedola kulo nyaka.
Abatyalomali banokuthenga izabelo zeBarrick Gold kwiqonga le-eToro nge-0% yekhomishini
Idola elibuthathaka ukuphakamisa umvuzo wempahla yegolide
Idola eyomelezayo ibingumoya ophambili wexabiso legolide ukusukela ngoMeyi njenge Forex Imarike itolikwa njengebhanki esembindini njengoko kuthetha ukuba bekungenakufane kwenzeke ukuba amazinga e-US anyuke phambi kuka-2023. Amazinga enzala asezantsi e-US ayenza buthathaka idola.
Iiasethi- ezinje ngegolide- amaxabiso edola yaseMelika ehla ngexabiso njengoko amaxabiso edola enyuka xa kuthelekiswa nezinye iimali.
Nangona kunjalo, isalathiso sedola, esenza umlinganiso wexabiso eliluhlaza ngokuchasene nebhasikithi yezona mali ziphezulu zithengiswayo kwilizwe liphela, liyatyibilika kwaye kunokubakho okungakumbi okuzayo ukuba iibhanki ezingoovimba zigcina imeko yazo emalunga nomgaqo-lawulo wemali.
Ngenxa yokuba igolide ayinamdla wenzala iba lixabiso elincinci ngokuchasene neeasethi ezinesivuno, ezinje ngezimali. Kodwa njengoko sele sibonile, ukubuyela umva kukwayimeko, ke idola esezantsi iyakuxhamla kwixabiso legolide.
Yongeza kuloo nto inokwenzeka ukuba ukunyuka kwamaxabiso kukhulisa intloko yayo embi, kwaye kwenza ukuba iiasethi ezinomdla zithathe inxaxheba kwilahleko njengoko ukunyuka kwamaxabiso kususa ixabiso lempahla ezinzileyo ezinje ngeebond.
Ngomhla ka-Epreli nangoMeyi i-Index Index yehla njengoko kulindelwe ukunyuka kwamazinga okulwa noqoqosho olugqithisileyo kunye nokunyuka kwamaxabiso kwabasebenzi. Kodwa nangona ezo ngxaki zingakhange ziphele, izivuno zibuyile njengoko abathathi-nxaxheba beemarike babala ukuba iibhanki eziphambili zilungile kuvavanyo lwabo lokuba ukunyuka kwamaxabiso kuya kudlula.
I-US Treasury yeminyaka eli-10 yeebhondi ngoku ikwi-1.285%, ibuyele apho yayikuMatshi njenge I-rally ye-bond ithatha umphunga (amaxabiso ebhondi anobudlelwane obuphambeneyo nezivuno), okuxhokonxwa kukuthenga okukhuselekileyo kunye nethemba lokuba ukunciphisa imali kusetelwe ukuqhubeka ixesha elithile.
Zonke ezi ziindaba ezilungileyo zegolide kwaye ke ngexabiso lesabelo likaBarrick.
IBarrick Gold (GOLD) xa ithelekiswa ne-FTSE 100 yetshathi yosuku olu-1, ngoncedo lwe-SharePad, nge-8 kaJulayi ka-2021.
Cwangcisa ukuphakamisa isahlulo sayo
Ukubuyela kwinqaku leCredit Suisse, elipapashwe ngoMeyi kulo nyaka, ibhanki yotyalo-mali ithathela ingqalelo ukuba abasebenzi basezimayini zegolide abakubonanga ukunyuka kwamaxabiso kuchaphazela iindleko zemveliso okwangoku, kwaye kwisiqingatha sesibini sonyaka abahlalutyi bebhanki bacinga ukuba uninzi lwabasebenzi bemigodi yegolide bazakuqala baphakamise izabelo zabo.
Ke, izizathu zokuthenga umgodi wegolide iBarrick zininzi kwaye zahlukene: njengothango ngokuchasene nokunyuka kwamaxabiso; njenge-asethi ekhuselekileyo nenokubuyisa iimvakalelo zomngcipheko; njengomthombo wengeniso ngeentlawulo zesahlulo, ezinokuthi xa ziphinde zatyalwa zaphinda zanyusa imbuyekezo zabanini zabelo; okokugqibela ukukhula kwenkunzi ukusuka kwixabiso lesabelo ebelityibilika kodwa ngoku kujongeka ngathi lifumene ezantsi.
Isivuno esilandeliswayo seenyanga ezili-12 (TTM) sisezantsi nge-1.56% okwangoku kodwa oko kusetelwe phantse kabini ukuphela konyaka ukuya kwi-2.85%.
Ithagethi yexabiso leBarrick Gold ine40% ephezulu
Kwabarhwebi abangama-20 abagubungela isitokhwe, ukulinganiswa kwemvumelwano kukuthenga okunamandla kwaye ixabiso ekujoliswe kulo le- $ 29 yi-40% yepremiyamu kwixabiso langoku.
Ukuba ezo ayizizo izizathu ezaneleyo zokuthenga iBarrick, imisebenzi yayo yobhedu kufuneka incede ekutywineni isivumelwano, njengoko umjikelo wempahla yorhwebo otyhale kakhulu watyhala ixabiso lesinyithi esiphambili seshishini kwindawo ephezulu yeedola 4.73 nge-12 kaMeyi kwaye kungoku Ukurhweba nge- $ 4.32.
Ingeniso yokukhula kwesabelo ngasinye kunyaka ophelileyo ibiyi-168% kwaye kulo nyaka izakuba malunga ne-77% emva kweenyanga ezili-12.
Izabelo ziphantsi kwe-1.1% namhlanje kwiseshoni yaseNew York kwi- $ 20.95.
Sikala iBarrick Gold ngokuthenga okunamandla.
Ungayithenga iBarrick Gold kwiqonga lotyalo-mali le-eToro nge-0% ikhomishini- kwaye ukuba ungumtyali mali wase-UK, akukho xanduva lwesitampu njengoko umrhwebi ehlawula egameni lakho.
eToro-Thenga kwaye utyalomali kwiiasethi
Thenga ngaphezu kwama-2,400 esitokisini kwi-0% yekhomishini
Ukurhweba amawaka eeCFD
Imali yedipozithi enebhanki / ikhadi lekhredithi, iPaypal, okanye ugqithiselo lwebhanki
Ukugqibelela kubarhwebi abatsha kunye nokulawulwa kakhulu
Kuphela zii-cryptos zokwenyani ezikhoyo kubasebenzisi base-US
Iipesenti ezingama-67 zeeakhawunti zotyalo mali zilahleka xa kuthengiswa iiCFD kunye nalo mboneleli. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba unganakho na ukuthatha umngcipheko omkhulu wokulahleka kwemali yakho.
Umbhali ngumhleli wezemali kuFinixio, umpapashi we buyshares.co.uk, stockapps.com, learnbonds.com kunye ne-bitbitins.com. UGary wayengumhlalutyi we-cryptocurrency kwiqonga lesibini ngobukhulu lotyalo-mali e-UK, utyalomali olusebenzisanayo, ukusukela ngo-2017 ukuya ku-Agasti 2020. UGary uphumelele eyona Mbasa ye-Cryptocurrency Writer 2018 ADVFN International Awards
Jonga zonke izithuba nguGary McFarlane
tags IBarrick Gold (IGOLIDE)